Paramount Animation dia manomboka ny mascot sy ny logo miaraka amin'ny clip | Famoronana an-tserasera
Ilaina ny mitadidy ny sary mihetsika fohy Pixar izay nanjary fantatra tamin'ny fiandohany. Y io dia Paramount Animation izay nampiditra mascot azy manokana ary ny sary famantarana azy amin'ny alàlan'ny fohy hafa hahalavorary ny zava-drehetra.
Esa ny jiro mitsambikina dia namaky tany vaovao Nandalo avokoa isika rehetra rehefa nijery sarimihetsika toy ny Toy Story, Inside Out sy ny maro hafa izay efa teo amin'ny tantaran'ny sinema sarimiaina.
Paramount Animation dia orinasa iray nanomboka ny diany tamin'ny 2011, saingy nandany taona maro lasa izahay nitondra logo sy mascot mba hampifandray azy ireo amin'ny sarimihetsika, andian-tsarimihetsika ary kalisaona fohy rehetra navoaka manomboka izao.
Tao anatin'ny fotoana fohy izay famantarana minimalist, na dia mbola eo aza ny fironana, tsy mahasarika ny sain'ny mpividy, logo iray dia mihoatra ny atolotra anao hampifandray ireo sarimihetsika navoaka.
Ary raha manana isika sary mihetsika fohy miaraka amin'ny mascot sy logo, dia satria nitombo ny famokarana sarimihetsika sarimihetsika izay ahafahantsika manantena hatramin'ny 4 horonantsary amin'ny 2021.
Ny fohy mihetsika dia noforonin'i Christopher Zibach ary novokarin'ny masoivohon'ny mpamorona ATK PLN sy Reel FX Creative Studios. Ao amin'ny clip mihetsika no ahitantsika ilay mascot antsoina hoe Tantara manipy vato ka mitresaka imbetsaka eny ambonin'ny farihy ary mivadika kintana mankamin'ny sary famantarana Paramount Animation.
Ary izay ho toetra vehivavy ny kintana mamirapiratra Paramount Animation Satria ny vehivavy dia ekipa mpilalao sarimiaina, noho izany dia namboarina tsara ny zava-drehetra mba hifanaraka amin'ity logo sy mascot manaitra ity. Ankehitriny dia tsy maintsy miandry ny horonantsariny isika hahita izay hataon'izy ireo ary raha hanaraka ny fiandrasan'i Pixar izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Paramount Animation dia efa manana mascot sy sary famantarana azy manokana